JESU NDIVO VOGA VANOPONESA
"Ruponeso haruwanikwi kuna ani zvake, nokuti hakuna rimwe zita pasi pedenga rakapiwa kuvanhu ratingaponeswa naro" (Mabasa 4 ndima 12).
Kune mhando nhatu dzezvivi. Chekutanga, chivi chakabva kuna Adama. Bhaibheri rinotijekesera chivi ichi. Tinoverenga mashoko aro muna VaRoma 5 ndima 12. Inoti, "Naizvozvo, chivi sezvachakapinda munyika nomunhu mumwe, norufu rukapinda nechivi, uye nenzira iyi rufu rwakauya kuvanhu vose, nokuti vose vakatadza". Adama ndiye akapara chivi ichi. Zvino, munhu wose ari mudzinza raAdama. Saka chivi ichi chakabata munhu wose. Izvi hazvifadzi chose. Asi ndizvo zvakatoitika.
Chivi chechipiri ndechekuparirwa nevamwe. Tinochiona muna Joshua 7. Nhoroondo iyi inotaura nezve mumwe murume. Murume uyu ainzi Akani. Akani ane chivi chaakapara. Chivi ichi chakabva chabata vana vose vaIsraeri. Vakanga vakunda rumwe rudzi. Rudzi urwu rwakanga rune simba. Rwakanga ruri rweJeriko. Asi Mwari vaisada kuti vatore zvinhu zveJeriko. Vakanga vatovaraira kudero. Izvi ndizvo zvatinovona muna muna Joshua 7 ndima 11. Zvino, vakanga vari kuronga kunorwisa rumwezve rudzi. Rudzi urwu rwakanga rusina simba. Saka vaitarisira kuruparadza.
Asi Akani ane nhumbi dzaakanga atora. Akadzitora muJeriko umu. Akabva adziviga. Izvi ndizvo zvatinovona muna Joshua 7 ndima 21. Izvi zvakaita kuti Israeri ikundwe muhondo yakatevera iyi. Munhu mumwe ndiye akanga atadza. Asi akanga aparira nyika yose. Izvi ndizvo zvakaitikavo pakatadza Adama. Akatadza oga hake. Asi akabva aparira nyika yose. Izvi zvinofananavo nezvinoitika mudzinyika. Mukuru wenyika angaita chimwe chinhu. Chinhu ichi chinogona kunge chisina kunaka. Saka chinogona kupedzisira chapinza nyika yose mudambudziko.
Chivi chechitatu ndechakuzviparira. Saka hapana munhu angati haana zvivi. Anogona kunge asina kuchipara iye. Asi Adama akatomuparira. Saka hapana asingafaniri kuponeswa. Asi tinotenda Mwari. Munhu wose anogona kuponeswa. Anoponeswa muna Jesu Kristu. Kuponeswa uku kunenge kuri kubviswa muzvivi. Kunenge kuri kusungunurwa kubva kumabasa ezvivi. Kunenge kuri kusikwa patsva kwemweya wake. Kunenge kuri kudzorwa kuna Mwari. Jesu voga ndivo vanogona kuponesa nenzira yakadai.
Ndiko kusaka tichiparidza Vhangeri. Tinoda kuti vanhu vose vagamuchire Jesu Kristu. Tinoda kuti zvivi zvavo zvikanganwirwe. Tinoda kuti vaitwe veropa reVamwari. Tinoda kuti vaitwe verudzi rwaMwari. Hareruya!
Ishe vandinoda. Ndinokutendai. Makaita kuti ndisangane neVhangeri. Vhangeri iri isimba. Ndiro simba ramunoshandisa kuponesa vanhu. Ndiro ramunoshandisa kuporesa vanhu. Ndiro ramunoshandisa kusungunura vanhu. Ndinonyengeterera vasati vatendeuka pasi rose. Meso avo ngaavhurike. Ngavavone kuti vakatadza. Ngavauye kuna Kristu. Ngavagamuchire kanganwiro yezvivi izvi. Muzita raJesu. Ameni.